Tag: funnels beddelaad | Martech Zone
Tag: funnels beddelaad
Oribi: Falanqaynta Suuq-Gelinta No-Code-ka ah Jawaabaha Aad U Baahan Tahay Inaad Ganacsigaaga Ku Horumariso
Jimco, Oktoobar 9, 2020 Jimco, Oktoobar 9, 2020 Douglas Karr
Cabasho aan sii waday inaan si xoogan ugu dhawaaqo warshadeena waa sida falanqaynta xun ay ugu tahay shirkadda celcelis ahaan. Falanqaynta asal ahaan waa qashin xoor, mashiin weydiin, oo leh garaafyo fiican oo u dhexeeya. Inta badan shirkadaha waxay ku soo baxaan qoraalkooda falanqaynta ka dibna wax fikrad ah kama hayaan waxa ay fiirinayaan ama ficillada ay tahay inay ku saleeyaan xogta. Runta marka loo sheego: Falanqaynta waa Mishiin Su'aal… Maahan Mashiin Jawaab ah
MoEngage: Falanqee, Qayb, Hawlgal, oo Shakhsiyee Safarka Macaamilka-Koowaad
Macaamilka-ugu horreeya ee macaamiilku wuu ka duwan yahay. Intii ay noloshooda ku meeraysaneysay taleefannadooda gacanta, waxay sidoo kale dhex boodayaan aaladaha, goobaha, iyo kanaalada. Macaamiisha waxay filayaan in magacyadu ay had iyo jeer la socdaan iyaga oo ay ku gaarsiiyaan waaya-aragnimo shakhsi ahaaneed dhammaan dhinacyada taabashada jirka iyo dijitaalka ah. Hadafka MoEngage waa inuu ka caawiyo noocyada inay falanqeeyaan, qayb ka qayb galaan, oo ay shakhsiyeeyaan safarka macaamiisha. Dulmarka Guud ee MoEngage Falanqaynta Aragtida Safarka Macaamiisha ee ay bixiso MoEngage waxay gacan ka geysaneysaa suuqgeynta khariidaynta safarka macaamiisha si
Sabti, Febraayo 27, 2016 Sabtida, Juun 8, 2017 Douglas Karr
Hotjar waxay bixisaa qalab dhameystiran oo loogu talagalay cabbiraadda, duubista, kormeerka iyo ururinta ra'yi-celinta iyadoo loo marayo boggaaga hal xirmo oo la awoodi karo. Way ka duwan tahay xalalka kale, Hotjar waxay bixisaa qorshayaal qorshooyin fudud oo la awoodi karo ah halkaasoo ururadu ay ku soo saari karaan aragtiyo ku saabsan tiro aan xadidnayn oo degello ah - oo ay uga dhigaan kuwaan tiro aan xadidnayn oo isticmaaleyaal ah. Tijaabooyinka 'Hotjar Analytics' waxaa ka mid ah Heatmaps - oo bixinaya matalaad muuqaal ah oo ku saabsan qasabadaha isticmaaleyaasha, qasabadaha iyo habdhaqanka wareejinta. Duubista Booqdaha